Izindlu zikaTimothy - I-Airbnb
Tilton, New Hampshire, i-United States
Jabulela i-rustic all wood house ebheke ingadi yezithelo yomnumzane enegceke elivulekile langaphambili nendawo yokudlala yangaphandle yezingane ezincane. Yazisa i-carport yempahla, ubumfihlo obuthulile ngaphandle kwethrafikhi eseduze, nokho ukufinyelela imizuzu emihlanu ezindaweni zokudlela nezitolo.
Indlu yethu yonke yezinkuni ine-charm ye-rustic eyingqayizivele. Ikamelo lokulala eliyindlovukazi elikhulu lababili linendlu yokugezela enkulu yangasese enobhavu ojikelezayo wababili kanye neshawa. Indawo yokudlela enkulukazi kanye nekhishi lesimanje elinendawo yokuphumula elinendawo yokudlela ehlalisa abapheki abanobuhlakani kanye nezivakashi ezilambile. ITimothy House ihlinzeka ngendawo enkulu yezimoto ezimbili kanye nendawo yokupaka eyengeziwe eyanele imizuzu emi-5 kuphela ukusuka ezindaweni zokudlela ze-Interstate 93 kanye nezitolo.
4.93 · 322 okushiwo abanye
ITimothy House isendaweni eyi-6 acre enamahlathi amakhulu ephakathi kwepaki lasekhaya eligcinwe kahle kanye nokuthuthukiswa kwezindlu zasemakhaya, zombili ezifihlwe kahle ngamahlamvu amasizini amathathu. Inikeza ukufinyelela okusheshayo ezindaweni zokuvakasha ezimaphakathi ne-New Hampshire okuhlanganisa amachibi endawo, izindlela zokuhamba izintaba, nemisebenzi yezemidlalo yasebusika. Ngenkathi cishe imizuzu engama-90 ukusuka eziNtabeni eziMhlophe ezinhle kakhulu kanye neBoston yomlando, iTimothy House nayo iyimizuzu nje ukusuka ku-Interstate 93, izitolo ezinkulu nezitolo, izindawo zokudlela kanye nezitolo.
Ababungazi bakho, uDave noCathy, bazobe bekhona eduze kwendlu ehlukene kodwa enamathiselwe; ngeke ziphazamise ukuhlala kwakho ngaphandle uma zidingeka ngokuqondile noma ziceliwe. Isifiso sabo ukuthi ube nesikhathi esiyimfihlo, esithulile, esinethezekile, futhi ekugcineni, esijabulisayo e-Timothy House!
Ababungazi bakho, uDave noCathy, bazobe bekhona eduze kwendlu ehlukene kodwa enamathiselwe; ngeke ziphazamise ukuhlala kwakho ngaphandle uma zidingeka ngokuqondile noma ziceliwe. I…
Hlola ezinye izinketho ezise- Tilton namaphethelo